सरकारले भन्यो–विप्लव समूहको शक्ति सञ्चयका लागि वार्ता हुँदैन | Ratopati
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeसाउन २, २०७६ chat_bubble_outline1
काठमाडौं– सरकारले प्रतिवन्धित विप्लव समूहले शक्ति सञ्चय गर्नेगरी वार्ता नहुने स्पष्ट पारेको छ।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधी मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीवार मन्त्रालयमा गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री बास्कोटाले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन भनिरहेको बताउँदै जेलमा राखिएका मान्छे छोड्दै उनीहरुको शक्ति सञ्चयका लागि वार्ता नहुने बताए ।
उनले भने, ‘वार्ताका लागि मान्छे छोड्नुपर्ने भन्ने हुँदैन । ५२ सालदेखि ६२ सालसम्म के भयो ? वार्ता गर्ने, छोड्ने फेरि शक्ति सञ्चय गर्ने ? फेरि त्यसकै दुस्चक्रमा फर्किने ? त्यसमा सरकार सचेत छ ।’
सरकारले समातेको मान्छे बन्दुक बोक्नका लागि छाडेर वार्ता गर्ने कुरा नहुने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘वार्ता चाहिँ गर्ने, यसको निष्कर्षमा नपुग्ने र फेरि पहिलेकै अवस्थामा जाने भन्ने हुँदैन । कमजोर धरातलमा बसेर वार्ता हुँदैन ।’
उनले भने, ‘एकलाई दुई बनाउने, छलाङ मार्ने हिजोकै जस्तो चक्र अब फेरि दोहोरिँदैन । उहाँहरुले एउटा होहल्ला सुरु गर्नुभएको छ । होहल्लाको पछि लागेर हुँदैन । उहाँहरु वार्ताका लागि आउनुहुन्छ भने स्वागत छ ।’
July 18, 2019, 7:14 p.m. Tilak Shrestha